Zuza kanye nokulimala kweziphuzo zamandla
Sekuyisikhathi eside abantu bezama ukufezeka ukufezeka empumelelo yayo. Ukuze sigcwalise ibhizinisi ngokuhamba kwesikhathi, kumelwe siqale ngokuphumelelayo ukunqoba ukukhathala komzimba, hhayi evamile emithwalweni eningi yesigqi samanje sokuphila. Izishukumiso zesimiso sezinzwa ziye zaziwa kusukela ezikhathini zasendulo, kodwa ukuqaliswa kweziphuzo zamandla kuye kwasiza abantu nganoma isiphi isikhathi, ngokoqobo, ukuthenga ukuvuthwa okunjalo okudingekayo kwe-vivacity. Ngamunye wethu ngezikhathi ezithile uyayidinga - noma ngabe ungumfundi phambi kokuhlolwa okunomthwalo wemfanelo, noma umsebenzi wehhovisi, ophazamiseke ngomsebenzi, noma umqeqeshi ozama ukubeka irekhodi, elele ebuthongweni lomshayeli - esikhathini sethu sokulwa nokukhathala nokulala kunzima. Udinga nje kuphela amandla okuphuza okuphuthumayo.
Namuhla emashalofini ezitolo ungathola isiphuzo sokuphuza amandla kuwo wonke ukunambitheka. Ngokusho kwabakhiqizi, abenzi lutho olulimazayo. Kodwa kungani bazama ukunciphisa iziphuzo zamandla ekusabalaleni? Ake sibone ukuthi iziphi izinzuzo neziphuzo zeziphuzo zamandla, ngoba inkulumo iphathelene nathi nempilo yethu.
Yiqiniso, inzuzo enkulu ukuthi imboni yamandla ivuselela isimo sengqondo futhi ishukumise umsebenzi wengqondo .
Ukuphuza kwamandla kungakhethwa ngokusekelwe ezidingo zakho. Iziphuzo eziningi eziyisimangaliso ziya endaweni yazo - kungaba ngomsebenzi onzima (izinkathazo ezisebenza kanzima) noma ukuzijabulisa okusebenzayo (uma ungumdlali noma i-nightclub frequenter). Iqembu lokuqala leziphuzo liqukethe ikakhulukazi i-caffeine, kanti okwesibili - amavithamini nama-carbohydrate.
Njengoba amandla aqukethe isisindo samavithamini ne-glucose , angabhekwa njengelusizo. Akufanelekile ukubhala ngamavithamini - izinzuzo zabo ziyaziwa ngisho nezingane. I-glucose iphinda inike izitho ezibalulekile zomzimba womuntu ngamandla, ngokushesha zingena egazini futhi zihlanganyele ezinkambisweni ze-oxidative.
Esikhathini esidlule, injini engcono kunazo zonke yayiyikhofi, naye kanye nokuqhathanisa iziphuzo zamandla.
Okokuqala, ijubane labanjiniyela bamandla lungcono kakhulu, kodwa konke ngenxa yokuthi ziyi-fizzy.
Okwesibili, ukusebenza kahle - uma indebe ikhofi isebenza amahora angu-1-2 nje kuphela, khona-ke inamandla igcina ithoni ngamahora angu-3-4.
Futhi-ke, kulula - amandla okupakisha angathathwa ngaso sonke isikhathi futhi asetshenziswe noma kuphi nanoma yisiphi isimo.
Isithunzi samalungu futhi, kubonakala sengathi akukho okumele kuthumele. Kodwa akukho okuhle noma kunjalo. Ngeshwa, iziphuzo eziyisimangaliso zinamaphutha amaningi.
Okokuqala kokungabikho - isilinganiso esiqinile sesiphuzo (ungasebenzisa okungaphezu kweyodwa noma amabili amathini ngosuku). Ukuhlukunyezwa kwamandla kungaholela ekwandeni kwengcindezi yegazi noshukela egazini.
EDenmark, eFrance naseNorway iziphuzo zezidakamizwa zithengiswa kuphela kuma-pharmacy futhi zibhekwa njengomuthi. Ngokusemthethweni ayavunyelwe. Futhi iziphathimandla zaseSweden ezisendleleni yokwenza izinguquko ezinjalo - uphenywa ngokufa kwezintathu (ngokusho kolwazi olungathembeki) olwenzeka ngenxa yokusetshenziswa kwabanjiniyela bamandla.
Njengoba sekuphawuliwe, amavithamini aseziphuzweni ziqukethe, kodwa azikwazi ukufaka indawo eyinkimbinkimbi ye-multivitamin.
Futhi, umbono omkhulu ongalungile wukuthi iziphuzo zamandla ezinika amandla zisinika amandla. Eqinisweni, isiphuzo ngokwayo asiqukethe amandla , kodwa izingxenye zalo zenza umzimba usebenzise amandla awo. Ngakho-ke, okuqukethwe okuqukethwe kungasebenza njengesihluthulelo ezigciniwe ezifihliwe zomzimba. Ngakho-ke, thina sisebenzise amandla ethu ngokungadingekile, okwathi ngemva kwalokho kufanele sikhokhe kamuva ngokuhamba kokuqwashisa, ukukhathala nokucindezeleka isikhathi eside.
Wonke umuntu uyazi ukuthi i- caffeine iyingozi. Futhi okuqukethwe kwayo kubunjiniyela bamandla akunciphisi izinga lokulimala. Ukusebenza kusuka emahoreni amathathu kuya kwamahlanu, i-caffeine isusa isimiso sezinzwa futhi siyilutha. Imvelo encane iyingozi kakhulu emithonjeni ye-caffeine.
Ngaphezu kwalokho, i-vitamin B, equkethe iziphuzo ezinjalo eziningi kakhulu, ibangela ukushaya kwenhliziyo ngokushesha nokuthuthumela emlenzeni .
Futhi, iziphuzo zezidakamizwa zinomthelela omuhle , ngakho-ke abagijimi kufanele bakhumbule lokhu futhi bangathathi amandla emva kokuqeqeshwa, ngoba phakathi nemidlalo, umzimba usuvele ulahlekelwa amanzi amaningi.
Umthamo owengeziwe usongela imiphumela emibi: i-tachycardia, i-psychomotor agitation, ukwethuka okwedlulele, ukucindezeleka.
I-Taurine ne-glyukolononakton , equkethe amandla, ngokusho kochwepheshe, kungenzeka ukuthi ingaphephile. Ososayensi ababazi imiphumela yabo, ikakhulukazi ngokuhambisana ne-caffeine. Futhi embizeni eyodwa yamandla ukuphuza umthamo wansuku zonke we-taurine udlula izikhathi eziningana, futhi emabhange amabili esiphuzo esinjalo umthamo wansuku zonke we-glucoronachton udlula izikhathi ezingamakhulu amahlanu.
Njengoba ubona, izinzuzo zabanjiniyela bamandla ziphansi kakhulu kunomonakalo, kodwa isigqi samanje sokuphila sinobuhlanya ngempela, futhi asikho isiqinisekiso sokuthi ngeke usudinga ibhange eliyisimangaliso kanye kanye. Yiqiniso, ukusetshenziswa kweziphuzo ezinjalo kufanele kugwenywe, kepha uma kufika isikhathi, futhi kufanele ukwenze, qiniseka ukuthi ufunda ngokucophelela imithetho yokusetshenziswa kwayo.
Izincomo zokusetshenziswa kwabanjiniyela bamandla
Ungadluli umthamo wansuku zonke we-caffeine - ungaphuzi amathini angaphezu kwamabili wesiphuzo ngosuku.
Qiniseka ukuphumula futhi uphinde uthole amandla uma isenzo sesiphuzo siphela.
Ungaphuzi iziphuzo zikagesi emva kokuzivocavoca - ezemidlalo ukwandisa ukucindezelwa kwegazi, neziphuzo zamandla zizokhula nakakhulu. Kungaba yingozi.
Emva kokuphuza amandla okuphuza, ungadli ukudla okuqukethe i-caffeine (isibonelo, itiye, ikhofi), ngaphandle kwalokho ungadlula umthamo. I-caffeine idonswa emzimbeni emahoreni angu-3-5, kodwa noma kunjalo, ayikho ngaphezu kwengxenye.
Iziphuzo eziningi ze-energy ziyi-caloric, ngakho-ke uma uzama ukunciphisa isisindo, uthathe zona ngaphambi kokuqeqesha, hhayi emva kwayo.
Ungahlanganisi iziphuzo zamandla ngotshwala. Njengoba sekushiwo kakade, i-caffeine yandisa ukucindezelwa kwegazi, futhi utshwala luyakha umphumela wayo. Ungathola umbono wezinkinga ezibangelwa yi-hypertensive maduze.
Amandla aphikisana nokukhulelwa, intsha, izingane kanye nabantu asebekhulile. Ngaphezu kwalokho, abantu ababhekene ne-hypertension, i-glaucoma, ukuzwela kwe-caffeine, ukuphazamiseka kokulala nezinkinga ze-cardiovascular are also recommended to use them.
Ngokusho odokotela, iziphuzo zokuphuza i-vitamin substitute for coffee, futhi akukho lutho, ngaphandle kwalokho, okulimaza kakhulu. Ngakho zenzele ukuthi yini engcono kakhulu. Mhlawumbe ikhofi nge-chocolate ngendlela endala akukubi nakakhulu?
Yikuphi ukudla okuthuthukisa nokugcina i-tan?
Iminqumo neminqumo: izidakamizwa
Noma kunjalo, ngabe uPutin noKabaeva batshadile noma cha?
Umfazi kaStas Kostyushkina ubikezela umsebenzi womculi, ividiyo
Izindlela zokuqinisa amandla ezifaka i-tonus emzimbeni
I-Horoscope, i-Aries 2010 ngonyaka we-tiger, owesifazane
Ingabe uzoya ekudleni? Nakhu okudingeka ukwazi!
U-Prokhor Chaliapin uqale wakhuluma ngengozi yomndeni esabekayo
Ngesikhathi umyeni esebenza
Umdlali weBhola u-Alexander Kerzhakov washada nendodakazi yenkosikazi
Inkukhu ebhiya nelayisi
6 izimpawu ukuthi umuntu uyakuthanda